"नियाग्रा": खुला हावामा पानी पार्क अतिथि पर्खिरहेको
Turgenev राजमार्ग मा, क्रास्नोडार नजिकै, नयाँ पानी पार्क "नियाग्रा" खुलेको छ। आधुनिक aquacomplex पानी सवारी र ढलान को एक किसिम, एक विशाल स्विमिंग पूल, वयस्क र छोराछोरीको मजा क्षेत्र, एक रेस्टुरेन्ट र क्याफे-पट्टी लागि आरामदायक बस्ने क्षेत्र प्रदान गर्दछ।
पानी पार्क को नवीनतम पीढी - Turgenev राजमार्ग मा Tahtamukaysky क्षेत्रमा धेरै अगस्ट अन्तिम गर्मी को Adygea को गणतन्त्र मा चोटी मा पानी मनोरञ्जन "नियाग्रा" को लागि एक नयाँ केन्द्र खोलेको छ। , सिजन यो खुला छ किनभने - किनमेल केन्द्र Turgenev गरेको राजमार्ग 35 नयाँ पानी पार्क को "मेगा" (50 मिटर) पछि प्रसार जटिल।
सामान्य मा भने
एक्वा चार खींच, छोराछोरीको पानी क्षेत्र, वयस्क र रेस्टुरा एक स्विमिंग पूल प्रदान गर्दछ।
प्रवेश दुवै पक्षलाई कोठा, वर्षा र आरामदायक सफा र सहज शौचालय परिवर्तन गर्दै त्यहाँ। पनि भीड घण्टा मा, विशाल, फराकिलो undressing लागि कोठा कुनै crowding छ। लकर बन्द।
ठूलो इन्डोर क्याफे मा एक खाजा पानी मनोरञ्जन पार्क "नियाग्रा" को हृदय मा स्थित छ लो। पानी पार्क को बिर्सने अतिथि धेरै आउटलेटहरू छन्। लागि स्नान, sunblock, तौलिया, आदि सर्कल: तिनीहरूले मनोरञ्जनको लागि आवश्यक सानो कुरा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ
ढलान बाहेक वयस्क को आधा, मा, संगठित भँवर संग पूल क्षेत्र मा, त्यहाँ geysers र "पानी" को स्थापना हो।
पानी पार्क मा रोमाञ्चक खेल प्रबन्ध जुन एक छुट्टै पूल, छ, र केही समय मा अनुभवी निर्देशक पौडी खेल्न सिक्न।
"नियाग्रा" अतिथि लागि प्रतीक्षामा छ
हप्तादिन मा, विशेष गरी पहिलो पारी मा, छैन धेरै "नियाग्रा" जलीय केन्द्रमा भीड। पानी पार्क सप्ताह अन्त मा जीवित आउँछ। दुई दिन फेरबदल जो तीन बिहान सम्म "गूंज" एक नाइट क्लब, थपियो।
मा हप्ताको कुनै दिन पहिलो पारी मा 10 AM सुरु र2बजे समाप्त हुन्छ। पछि प्राविधिक ब्रेक दोस्रो पारी सुरु हुन्छ। यसलाई 15:00 देखि 19:00 गर्न चल्छ। टिकट एक निश्चित पारी रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ, र सबै दिन। सोमवार देखि शुक्रवार गर्न वयस्क प्रवेश टिकट लागत 1400 rubles (एक पारी - 700 दल्नु।), बच्चाहरु - 1 200. शनिबार र आइतबार मा एक वयस्क लागत लागि प्रवेश 1600 rubles, बच्चाहरु को लागि - 1300 (एक पारी - 700 rubles) ।
मेहमान मौसममा पानी पार्क "नियाग्रा" मूल्य अपरिवर्तित रहन्छ भन्न रूपमा।
सानातिना दोष पानी मनोरञ्जन केन्द्र, मेहमान वयस्कहरूको लागि छाते र ढलान को सानो को क्याफे मा नम्बर र निकै छोटो मेनु भन्न। केही पनि भर खराब ल्यान्डस्केपिङ्ग को गुनासो। हालै खुलेको जो एक पानी पार्क, र हरियो क्षेत्रमा बढ्न केही समय आवश्यक - तर एउटा "नियाग्रा" भनेर बुझ्न आवश्यक छ।
केन्द्र प्रशस्त सुरक्षित पार्किंग छ।
छोराछोरीको आनन्द क्षेत्र
छोराछोरी पानी गतिविधिहरु इलाका एकदम ठूलो छ। पानी सवारी सबै आवश्यक सुरक्षा प्रदर्शन छ। fidgets बीचमा विशेष गरी लोकप्रिय एक अन्तरक्रियात्मक पानी प्ले सिस्टम प्रयोग गर्छ।
बच्चाहरु क्षेत्र उमेर द्वारा विभाजित। बच्चाहरुको लागि 40 सेन्टीमिटरको गहिराइमा र एक शानदार पशु तथ्याङ्कले एउटा क्षेत्र छ। अतिथि लागि त्यहाँ पहिले नै पुरानो एक बिट, "छैन छोराछोरीको" बन्द र खुला ढलान संग दृश्यहरु छ। सप्ताहन्तमा मा, बच्चाहरु एनिमेटरहरु द्वारा मनोरंजन छन्।
lifeguards हेर्न पूल को परिधि मा पानी बसेर।
वयस्कहरूको लागि न्यानो रात
न्यानो गर्मी सांझ पानी पार्क "नियाग्रा" (क्रास्नोडार) रंग रोशनी रोशनी र नाइट क्लब खुल्छ। यहाँ संगीत र पौडनु संग रमाइलो तीन बिहान सम्म रहन्छ।
शुक्रबार राति र शनिबार "फोम सप्ताह" प्रबन्ध छ
प्रचार, कूपन, छूट
पानी पार्क "नियाग्रा" (क्रास्नोडार) विभिन्न पदोन्नति मा भाग। उदाहरणका लागि, विशेष साइटहरूमा, तपाईं छुट कुपन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। एक अतिथि प्रयोग टिकट संख्या कुनै प्रतिबन्ध छ। तर सबैले एक पटक मात्र स्वीकार गरिनेछ।
कुपन एक 50% को मनोरञ्जन मा राति सात सम्म बिहान दस बजे पार्क मा छुट गर्न entitles। वयस्कहरूको लागि, यो रकम 800 rubles गर्न, र बच्चाहरु को लागि कम छ - 650 rubles गर्न। कार्य को तीन वर्ष मुनिका बच्चाहरु सम्बन्धित छैन। तिनीहरूले निःशुल्क भ्रमण पानी पार्क।
नियम र प्रतिबन्धहरू
सबै सवारी कडाई शरीरमा र स्नान सूट मा दुवै, कंगन, भेदी, चेन, कान को बाली र अन्य साना धातु उत्पादन संग आउन निषेध गरिएको छ।
नशा को एक राज्य मा व्यक्तिहरूलाई साधारण मनोरंजन केन्द्र "नियाग्रा" मा प्रविष्टि निषेधित छन्। Waterpark छैन अतिथि को अग्रिम दर्ता जान्छ। कुपन कोड वा प्रवेश मा एउटा टिकट देखाउन पर्याप्त।
युवा अतिथि मात्र 18 वर्ष भन्दा बढी सँगैको संग पानी गतिविधिहरूको केन्द्र आउन सक्दैन।
सेप्टेम्बर मा, पानी पार्क सप्ताहन्तमा मात्र खुला छ।
अतिथिहरूको भ्रमण पानी पार्क "नियाग्रा", विभिन्न बिदा समीक्षाएँ। तर यो उल्लेख पर्छ भनेर वस्तुतः सबै प्रभावित चिप जलीय केन्द्र - स्थानीय प्लास्टिक कार्ड। यो बिल्कुल पार्क मा सबै कुराको लागि भुक्तानी गर्न सम्भव छ। उत्पादन को unspent रकम फर्के।
"नियाग्रा" - सारा परिवार सहज डेटिंग र रमाइलो पक्ष साथीहरूसँग लागि अविस्मरणीय साहसिक छ। आउनुहोस् र आफैलाई लागि हेर्न!
आकर्षण Mogilev र वरपरको क्षेत्र
पोर्चुगल मा गर्न शीर्ष कुराहरू
भर्जिनिया - संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य: इतिहास, वर्णन र चासो अंक
क्रेते मा किनमेल: सुपरमार्केट, बुटिक, बजार
लेक Baikal गर्न मास्को देखि प्राप्त गर्न कसरी: सुविधा र मार्ग सिफारिसहरू
मास्को - Yeysk - द्वारा कार, रेल, विमान त्यहाँ कसरी
आफ्नै हातमा एउटा विशेष नोटबुक कसरी बनाउने
अलेक्जेन्डर 1: बोर्ड को एक छोटो जीवनी र कैरेक्टराइजेशन
औषधि "Taufon" (आँखा खस्छ): निर्देश
अब्खाजिया मा आराम। यात्रा को समीक्षा।
घरमा ग्लास मा झरने
"लगअन विफलता :. खेल पुनः सुरु गर्न अवैध सत्र प्रयास गर्नुहोस्।" के गर्ने?
जो राम्रो छ: आईपीएस वा TFT? राम्रो स्क्रिन कसरी चयन गर्ने?
थर्मल ब्रेक संग ढोका: डिजाइन र मोडेल चयन को मर्यादा
एलईडी फ्लस: प्रयोगको लागि सञ्चालन र निर्देशन। लुकाइन् ताराहरु को खोज को लागि उपकरणहरू को अवलोकन
10 ज्ञात प्यारानोर्मल चकमा